Esi Your zite List debanyere aha ime na gị mgbe Akwụkwọ Akụkọ
Site: Fisayo February 16, 2018
Ị na-agụ ma na-eme na ozi niile ha n'aka gị email igbe? Ị na-adịghị efu si na oké ngwaahịa na-enye na ahaziri ozi ma ọ bụrụ na ị kaa ozi email maka nhichapụ enweghị ịgụ ha? Ị bụ internet entrepreneur iji email ahịa dị ka gị isi n'aka-eru gị iche na-ege ntị? I nwere ike imeta mma na-arụpụta site na iji Send usu.
All oké njọ internet marketers eziga akwụkwọ akụkọ. Site n'usoro nke email ahịa, digital ọchụnta ego iji Ugboro akwụkwọ akụkọ n'ahịa onwe ha nwere ahịa n'ime ha nzipu ozi ndepụta. Izipu ahaziri akwụkwọ akụkọ via email ahịa na-kasị kpọmkwem iru gị ndị debanyere aha. The nsogbu Otú ọ dị bụ na ọtụtụ email debanyere aha anaghị emeghe ahịa ozi ịntanetị; na internet marketers amaghị ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha na-eme.
Tinye SendPulse. Nke a bụ digital ngwá ọrụ site na nke i nwere ike inwe gị ndị debanyere aha na-agụ ma na-eme na gị akwụkwọ akụkọ. Beyond na-gị email ndepụta ime gị akwụkwọ akụkọ, SendPulse e mere iji hụ na gị ozi ruo gị lekwasịrị na-ege ntị ebe ọ bụla ha na-, mgbe niile, na aghaghị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na-ahapụ ego na tebụl nke gị ndị debanyere aha, SendPulse na-na-atụ aro ka ngwá ọrụ iji nweta ha na-akwụ ụgwọ unu elekere.
SendPulse e wuru ijere gị email ahịa mkpa atọ bụ isi ụzọ. N'ebe a, ha na--
Mụbara Clickthrough ozi ịntanetị
Ọ bụ ugbua na na ị na-adabere na nyere email ahịa mkpọsa iru gị iche na-ege ntị. Ma SendPulse enyere gị n'ihu. Ọ ana achi achi na gị ndị debanyere aha na-emeghe gị ozi ịntanetị na-eme omume ha na onye ọzọ na 50% ọma ọnụego. Mgbe Ohere nke ndị debanyere aha-azaghachi gị akwụkwọ akụkọ na-amụba site ruo 50%, ị pụrụ ụfọdụ tupu ere ihe.
Ebe a na-uru nke iji SendPulse gị email ahịa mkpọsa -
50% ụba Ohere inweta gị ozi ịntanetị meghere
SendPulse si SMTP Server ana achi achi deliverability ozi-e gị n'agbanyeghị na nnata 'ozi-ogbugba ndu
Ru ọgụgụ isi iji mee ka ozi-anabata, na ọnụ ọgụgụ na-emeghe ozi ịntanetị, na scheduler maka ezipụ ndị ozi ịntanetị na akpan akpan ụbọchị.
Web Push Ịma Ọkwa
Web push ngosi bụ otu nhọrọ iru gị ndị debanyere aha na niile ngwaọrụ ma ha na-ite n'ime ha ozi ịntanetị ma ọ bụghị. Ọ na-enye gị nweta gị nzipu ozi ndepụta debanyere aha na-enweghị n'ezie populating ha email igbe ahaziri ozi. Na web push, i nwere ike igosi gị ndị debanyere aha nke mkpa mmelite ọbụna mgbe ha na-agaghị ejikọrọ na internet.
SendPulse ngosi technology e mere na-eru ndị debanyere aha na push ozi n'agbanyeghị na ha na ngwaọrụ na ihe nchọgharị. The kacha nzube bụ iji nweta gị ozi gafee gị ndị debanyere aha na-esi na ha na-eme na ya n'agbanyeghị ọnọdụ ha na-ahụ onwe ha. Web push Ịma Ọkwa na-adịghị ejuputara n'ọnụọgụgụ email inboxes, ma debanyere aha na-enweta ha na ị na-enweta verifiable clickthrough udu na gị ahaziri ozi.
E nwere dị iche na usoro si n'ebe eziga nnukwu SMS, ma SendPulse trumps ha niile. Na SendPulse si nnukwu SMS technology, ị nwere ike izipu ọtụtụ puku ahaziri ozi gị ndị debanyere aha na ha mobile phones. Ebe gị ndị debanyere aha na-adịghị ike na-abanye n'ime ha ozi ịntanetị na-agụ gị akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ na-enweta push Ịma Ọkwa, ị nwere ike izipu ha SMS enweghị ihe ọ bụla mbipụta. Na otu click, ị nwere ike izipu otu ahaziri ederede ozi ọtụtụ puku gị ndị debanyere aha na nwere ya nye ha mobile phones na fọrọ nke nta otu oge na oge.
Gịnị ọzọ na-aghaghị Ị Maara Banyere SendPulse?
SendPulse nwere nza na-enye internet marketers na ndị ọzọ na obere ulo oru. Ụfọdụ n'ime ndị a na--
Ikike hazie ọtụtụ narị email ndebiri maka akwụkwọ akụkọ
Scheduler maka ezipụ ndị nyere ozi ịntanetị na akpan akpan ụbọchị
Ndenye aha forms maka ịnakọta web ọbịa 'ozi ịntanetị
Analytics maka atụ email oghe udu, pịrị njikọ nakwa dị ka ọnọdụ nke ndị debanyere aha
Easy mwekota dị iche iche na CMS na ecommerce nyiwe
Liberty izipu ruo 15,000 ahaziri ozi ịntanetị maka free kwa ọnwa
SendPulse e wuru si n'ala bilie izute mkpa nke niile edemede nke online marketers. Ọ na-e engineered site marketers maka marketers, na ya integrated Amamịghe echiche bụ ike na-debanyere aha ịrụ ezubere iche omume seamlessly. SendPulse bụ ọhụrụ ego na-eme ngwá ọrụ na bụla entrepreneur ga rụọ ọrụ taa n'ihi na mma azụmahịa ahụmahụ; Ọzọkwa, ọ na-abịa free niile iji na-enweghị ihe ọ bụla zoro ezo ọrụ.
-Akpa na-ekwu okwu on "Send usu: Esi Your zite List debanyere aha ime na gị mgbe Akwụkwọ Akụkọ"